Maxay Mulkiileyaasha Ganacsi ee Ecommerce u Baahan Yihiin Inay Ka Ogaadaan Dukaanka SEO | Martech Zone
Maxay Mulkiileyaasha Ganacsi Ecommerce U Baahan Yihiin Inay Ka Ogaadaan Dukaameysiga SEO
Wednesday, September 13, 2017 Douglas Karr
Waxaad si adag u shaqeysay si aad u farsameyso degel Shopify ah oo aad ku iibin karto alaabada macaamiisha la hadasha. Waqti ayaad ku qaadatay xulashada mawduuca, rarida buugaaga iyo sharaxaadahaaga, iyo dhisida qorshahaaga suuq-geynta. Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin sida cajiibka ah ee boggaagu u muuqdo ama sida ay u fududahay in la maro, haddii dukaankaaga Shopify uusan ahayn mashiinka wax lagu raadsado, fursadahaaga si dabiici ah u soo jiita dhagaystayaasha bartilmaameedkaagu waa yar yihiin.
Ma jirto dariiq ku xeeran: SEO wanaagsan ayaa dad badan u keenaya dukaankaaga Dukaan-dhig. Xog ay soo aruurisay MineWhat taas lagu ogaaday 81% macaamiisha ayaa baaraya alaab ka hor intaanay iibsan. Haddii dukaanku uusan u muuqan mid ka sarreeya qiimeynta, waxaad waayi kartaa iib - xitaa haddii alaabadaadu ay tayo sare leedahay. SEO wuxuu awood u leeyahay inuu siphon macaamiisha ulajeeddo inuu iibsado, ama kaxeeyo.
Maxay ubaahantahay Dukaankaaga Shopify
Dukaan kasta oo Shopify ah wuxuu u baahan yahay aasaas wanaagsan SEO. Iyo aasaas kasta oo SEO ah ayaa lagu dhisaa ereyada muhiimka ah. Iyadoo aan cilmi keyword weyn, waligaa ma bartilmaameedsan doontid dhagaystayaasha saxda ah, oo markaad bartilmaameedsan weydo dhagaystayaasha saxda ah, fursadahaaga soo jiidashada dadka ay u badan tahay inay iibsadaan waa yar yihiin. Intaas waxaa sii dheer, markaad wax ka ogaato baaritaanka eraygaaga muhiimka ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku dabaqdo aqoontaas meelaha kale ee ganacsiga, sida suuqgeynta waxyaabaha ku jira.
Ku billow baaritaankaaga ereyga muhiimka ah adoo samaynaya liis ereyada muhiimka ah oo aad u malaynayso inay ganacsiga ku habboon yihiin. Ku qeex halkan- haddii aad iibiso agabyada xafiiska, tani macnaheedu maahan inaad liis garaysid ereyada muhiimka u ah shuruudaha la xiriira xafiiska ee la xiriira alaabooyinka aadan iibin. Sababtoo ah waxay soo jiidataa dadka xiisaynaya agabyada xafiiska, macnaheedu maahan inay qadarin doonaan tagitaanka degel aan haysan badeecaddii ay markii hore ka raadsadeen Google.
Isticmaal aaladda keyword research si lagaaga caawiyo inaad soo xajisato macluumaadka ku habboon ee ku saabsan ereyada muhiimka ah ee aad furaha u tahay. Qalabka baaritaanka erayga ayaa kuu sheegaya keywords keyword ee baahida weyn loo qabo, keywords keywords ayaa leh tartanka ugu hooseeya, mugga, iyo qiimaha halkii guji xogta. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad ku sheegto ereyada muhiimka ah ee ay tartamayaashaadu u adeegsanayaan boggaga ugu caansan. Inta badan aaladaha cilmi baarista ee muhiimka ah waxay bixiyaan noocyo bilaash ah oo lacag leh, si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad tijaabiso sida ay u shaqeyso, waad isticmaali kartaa Qorsheeyaha Qalabka Keyword Google.
Samee Sharaxaadda Wax Soosaarka Smart
Markaad si buuxda u fahamto ereyada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad isticmaasho, waad ku dabaqi kartaa sharaxaada alaabtaada. Waa muhiim inaad iska ilaaliso qalabka muhiimka ah sharraxaaddaada. Google wuu ogyahay goorta waxyaabaha ay yihiin kuwa aan dabiici ahayn, waxaadna u badan tahay in lagugu ciqaabayo sameynta dhaqaaqan oo kale. Alaabooyinka qaarkood ee aad iibiso waxay umuuqdaan kuwo is-sharraxaya; tusaale ahaan, dukaanka sahayda xafiiskaaga waxaa laga yaabaa inay ku adkaato sharraxaadda waxyaabaha sida staplers iyo warqad. Nasiib wanaagse, waad ku baashaali kartaa sharraxaaddaada si aad waxyaabo uun udgoon leh u sameysid (oo aad naftaada u calaamadeyso geeddi-socodka).
ThinkGeek ayaa sidaas ku sameysay cutub-dheer sharaxaadda toosh fudud oo LED ah taasi waxay ku bilaabaneysaa qadka: “Ma ogtahay waxa nasiibka u leh tooshashka caadiga ah? Kaliya waxay ku yimaadaan laba midab: caddaan ama midab huruud-cadaan ah oo ina xusuusinaya ilkaha qof qaxwada jecel. Toosh noocee ah ayaa ah noocaas?
Ku dhiirrigeli faallooyinka ka imanaya Dukaamaysatada
Markaad ku martiqaaddo macaamiisha inay ka baxaan dib u eegista, waxaad abuureysaa barxad kaa caawinaysa kordhinta darajadaada. Mid Sahan ZenDesk waxay ogaatay in 90% kaqeybgalayaashu ay saameyn kuleeyihiin dib u eegista tooska ah ee khadka tooska ah. Daraasadaha kale waxay muujiyeen natiijooyin la mid ah: celcelis ahaan, dadka badankood waxay ku kalsoon yihiin dib-u-eegeyaasha khadka tooska ah sida ay ugu kalsoon yihiin talooyinka afka laga qaato. Waxaa muhiim ah in aysan ahayn oo keliya dib-u-eegista ku saabsan dib-u-eegista, laakiin sidoo kale bogagga wax soo saarkaaga. Waxaa jira dhowr dariiqo oo loo maro ku qanci macaamiisha inay dib u eegaan meheraddaada; miisaam xulashooyinkaaga, oo xisaabso habka ku habboon ganacsigaaga.
Helitaanka Caawinta SEO
Haddii dhammaan hadallada ku saabsan SEO ay kugu adkaadaan, tixgeli inaad la shaqeyso shirkad suuqgeyn ama hay'ad si ay kuugu hagto jihada saxda ah. Inaad khabiir ku leedahay dhinacaaga waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan ka barato farsamooyinka ka dambeeya SEO, iyo sidoo kale inaad diiradda saarto wax soo saarkaaga, isla markaana aad u keento khibrad adeegga macaamiisha ah.
Sida laga soo xigtay SEOInc, ah Shirkadda latalinta SEO ee San Diego, Ganacsiyada qaar waxay ka walwalayaan la shaqeynta hay'ad cabsi ay ka qabaan inay ka tanaasusho xakamaynta, laakiin tani runti maahan kiiska - illaa intaad lashaqayso shirkad sumcad leh.
Dukaanka ayaa noqday xulashada ugu sareysa ee wax ku iibinta khadka tooska ah. Sababtoo ah muhiimada sii kordheysa ee wadista macaamiisha ee aagagga Shopify-ku shaqeeya, Shopify SEO ayaa la kulantay koritaan deg deg ah sanadihii la soo dhaafay waxaana la filayaa inuu sii wado inuu si xawli ah u koro. SEOInc
Xitaa waxaad tixgelin kartaa inaad la shaqeysid xirfadlayaal xor ah oo khibrad leh oo leh xirfado muuqda ee SEO iyo faylalka tacliimeed ee ballaaran. Wax kasta oo aad go aansato, maskaxda ku hay in SEO ay tahay wax u baahan in si sax ah loo sameeyo, iyo inaad waqti u heyso mooyee inaad barato tabaha ugu fiican oo aad si guul leh ugu dabaqdo, waa maalgashi fiican in xirfadahaas loo dhiibo dhinac kale.
Tags: ganacsiga eocilmi-baarista muhiimka ahtayaynta shopifySEOseoincdukaankadukaamo soo iibsofikirka
Izotope RX: Sida Looga Saaro Sawaxada Asalka ee Duubista Codkaaga
Sep 24, 2017 at 1: 17 PM
Goob Wanaagsan! Jecel waxyaabahaaga!
Nov 22, 2017 saacadu markay tahay 1:21 PM
jeclaa hagahan. aad baad ugu mahadsantahay wadaagista